Fantsom-bokotra mitsingevana an-dranomasina, mpamatsy - mpanamboatra fantsona mitsingevana an-dranomasina any Sina
Fanamboarana sy fitaovana lehibe Fitaovana lehibe / fantsona anaty fatin-kodiarana: malefaka, solika ary solika tsy manadio sy voadonaAcrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Sarom-piarovana: fananganana manokana hisorohana ny kilema na fahasimbana ateraky ny fahavakisan'ny lozam-pifamoivoizana na ny fahavoazana ambonin'ilay lamba lehibe; Fanamafisana: Plies marobe amin'ny tadin'ny lamba mitafy avo. Tariby vy vy iray napetraka iray. Fonony: Menaka menaka malefaka tsy mitambatra. Vatana tokana sy fatana mitsingevana Materia ...
Selika mitsingevana miaraka amina fanamafisana farany
Fanamboarana sy fitaovana lehibe Fitaovana maintso / fantsona anaty fatin-kibo: malefaka, menaka ary solika tsy misy sotasota vita amin'ny Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Saron'ny fiarovana: fananganana manokana hisorohana ny kilema na fahasimbana ateraky ny fahavakisan'ny fahavoazana na ny fahasimbana ambonin'ilay firakotra lehibe; Fanamafisana: Plies marobe amin'ny tadin'ny lamba mitafy avo. Tariby vy vy iray napetraka iray. Sarony: Menaka malefaka syntetika mainty malefaka ary mahatohitra solika. Fatin'olon-tokana sy faty mitsingevana ...
Tondra mitsingevana tanker Rail
Fanamboarana sy fitaovana lehibe Fitaovana maintso / fantsona anaty fatin-kibo: malefaka, menaka ary solika tsy misy sotasota vita amin'ny Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Saron'ny fiarovana: fananganana manokana hisorohana ny kilema na fahasimbana ateraky ny fahavakisan'ny fahavoazana na ny fahasimbana ambonin'ilay firakotra lehibe; Fanamafisana: Plies marobe amin'ny tadin'ny lamba mitafy avo. Tariby vy vy iray napetraka iray. Sarony: Menaka malefaka syntetika mainty malefaka ary mahatohitra solika. Fatin'olon-tokana sy fatin'olona roa ...
Tail mitsingevana rambony
Mampihena ny fantson-tsambo mitsingevana
Fanamboarana sy fitaovana lehibe Fitaovana maintso / fantsona anaty fatin-kibo: malefaka, menaka ary solika tsy misy sotasota vita amin'ny Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Sarom-piarovana: fananganana manokana hisorohana ny kilema na fahasimbana ateraky ny fahavakisan'ny lozam-pifamoivoizana na ny fahavoazana ambonin'ilay lamba lehibe; Fanamafisana: Plies marobe amin'ny tadin'ny lamba mitafy avo. Tariby vy vy iray napetraka iray. Sarony: Menaka malefaka syntetika mainty malefaka ary mahatohitra solika. Fitaovana mitsingevana: sombim-bidy mihidy. Ou ...